Bamqumbe phansi uSikhosana, sekukhala isicathulo sikaMoloi kwezokusubatha - Impempe
Bamqumbe phansi uSikhosana, sekukhala isicathulo sikaMoloi kwezokusubatha
Sekunobuholi obusha kwinhlangano eyengamele ezokusubatha kuleli, i-Athletics South Africa (ASA) kulandela ukuchithwa kuka-Aleck Sikhosana esikhundleni sokwengamela le nhlangano. USikhosana neningi lalelesebhodini lakhe bashaywe yivoti ngesikhathi kunokhetho lobuholi obusha eKemptom Park, eGauteng ngoMgqibelo.
Kube nguJames Moloi othola amavoti amaningi nameze wabekwa njengomengameli we-ASA ngemuva kokhetho. UMoloi uthole amavoti angu-39, uSikhosana yena waba nangu-27, okufikise ekugcineni isikhathi sakhe kule nhlangano abeseyengamele iminyaka engaphezu kweshumi.
Le nsizwa edabuka eDiepkloof, eSoweto, yayingumgijimi ngezikhathi zayo kanti beyiphethe iCentral Gauteng Athletics ngaphambi kokungenela ukhetho lwe-ASA.
UShireen Noble yena uqokelwe kwesokuba yiphini likaMoloi, okuyisikhundla ebesiphethwe nguHarold Adams phambilini. Kungokokuqala owesifazane ephatha isikhundla esiphezulu kangaka emlandweni wale nhlangano,
USikhosana no-Adams bathatha izikhundla kule nhlangano ngo-2014 kanti bakwazile ukuletha uzinzo kule nhlangano futhi kuke kwabukeka kungathi bazonikwa elinye ithuba baqhubeke nokuhola i-ASA.
Nokho indlela abaphathe ngayo izinto ngesikhathi kubheduka iCovid-19 kuleli ayizange ibagculise abantu abaningi kwezokusubatha ikakhulukazi abagijimi. Bekunomuzwa wokuthi baphuze kakhulu ukuvulela ukuzilolonga nemijaho okusalise abakuleli emuva njengoba kubhekwe kuma-Olympic Games nje ngoJulayi.
Abanye abaqokelwe kwibhodi entsha ngoJean Verster (track and field), Enock Skosana (road running), Jakes Jacobs (cross-country), Hendrick Mokganyetsi (athletes’ commission), Esther Malema, Adelinah Ranthimo, Norma Nonkonyane, Ntathu Gwadiso, Jazz Mnyengeza (USSA).
Previous Previous post: Usephoqeleke ukuliyeka ibhola unozinti owaxhopheka ejimini
Next Next post: UKhune uziyekelele yena – Hans Vonk